Imirikiti Mkpebi Purzụta na B2B Na-eme Tupu Gị Kpọtụrụ Companylọ Ọrụ Gị | Martech Zone
Site na oge azụmaahịa ọzọ na-akpọtụrụ azụmaahịa gị ịzụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ha bụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ ruo pasent 90 nke ụzọ site na njem ịzụta ha. Ihe karịrị ọkara nke ndị niile na-azụ B2B na-amalite usoro nke ịhọrọ ndị na-ere ha ọzọ site na ịme nyocha na-enweghị atụ gbasara nsogbu ịma aka metụtara nsogbu ha na-eme nyocha.
Nke a bụ eziokwu nke ụwa anyị bi na ya! Ndị na-azụ B2B enweghị ndidi ma ọ bụ oge ichere ka onye nnọchite ahịa gị na-apụ apụ iji webata ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ha amatala nsogbu a, ha emeela nyocha. Ndị otu gị kwesịrị ịdị na-ewepụta ọdịnaya na-akwado ma na-ewu ikike na mgbasa ozi mmekọrịta yana nsonaazụ ọchụchọ ka ị wee nwee ike ijide ha na ọkwa nyocha. Ou
B2B Ahịa nwere ike isi ike, ma ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ebe ahụ, ị ​​na-atụgharị wiil gị na-anwa ịme ka ịre ahịa na atụmatụ ọdịnala ọdịnala dịka ọkpụkpọ oyi, azụmaahịa na ozi izizi. Ihe omuma a, B2B Ahịa agbanweela, ga - egosi gị ihe kpatara ndị na - ere ahịa dị egwu ji ngwa ngwa dochie usoro ịre ahịa na ịre ahịa ọpụpụ na ụzọ inbound. Ikwesiri igbanye otutu ndu na ego kariri, ma ihe omuma a gha egosi gi ihe ndi puru ime ka ị laghachi. Site jirichaa Social Media.
Fọdụ ndị folks ga-achọ ịmalite inbound dị ka onye dochie anya ịre ahịa ọpụpụ. Ekwetaghị m na nke ahụ bụ ezigbo ntụnyere. N'ezie, ekwenyere m na nchikota nke inbound na outbound na-abawanye ohere gị imechi nke ọma. Ọdịnaya nwekwara nnukwu ndụ - ihe ọmụma ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ nwere ike ịmịga ụzọ ruo ọtụtụ afọ, na-enyere ndị ahịa gị aka na-ere ahịa ka ha lekwasị anya na iwulite mmekọrịta ahụ na imechi ọrịre ahụ karịa ịkọsa atụmanya ahụ.
Tags: b2b ndị na-azụ ahịa njemahịa b2bmkpebi b2b ịzụtab2b nyochab2b ahịandị na-azụ ahịa njemmkpebi ịzụta
Ọ bụghị naanị gị na mgba na nchịkọta